Na-eto eto kabeeji | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Na-eto eto kabeeji
Anyị na-eto eto kabeeji n'ubi anyị: iwu nke ịkụ ihe ma lekọta
Kedu ka esi eto kabeeji n'ime ogige ubi a na-emeghe: nri, ịkụ ihe na ilekọta osisi Nri kabeeji bụ ihe ịchọ mma nye ọtụtụ nri ndị obodo. Ihe mere eji ewu ewu a bu mkpochapu osisi a di iche iche, nakwa na uru bara uru o nwere.
Ihe niile banyere nlekọta kwesịrị ekwesị na ịkụkụ broccoli
Achọpụtawo broccoli kabeeji n'oge na-eri nri. A na-akwado Broccoli maka ndị nwere ọrịa shuga na ndị nwere nsogbu obi, ọtụtụ folic acid na eriri na-eme ka ọ bụrụ ihe dị oké mkpa maka ndị inyom dị ime. Kedu ka esi eto seedlings ha Tupu ị kụọ, ihe mbụ ị ga-eji kpebie na ị ga-ahọrọ ụdị dịgasị iche iche, mgbe ahụ, ịkwado nkwadebe nke mkpụrụ osisi broccoli.
Kedu ihe bara uru kabeeji savoy
Ọtụtụ ndị njem nleta anyị bụ ndị si mba ọzọ (na Europe, USA, Canada) na-ekwu na kabeeji na ụlọ oriri na ụlọ (ebe dị iche iche, salad na achịcha) dị nro, na-atọ ụtọ ma dị ụtọ karịa nke anyị. Isi ebe a abụghị nkà nke ndị osi ite, ma n'eziokwu na ha na-ahọrọ kabeeji Savoy ebe a. N'ụzọ dị mwute, kabeeji savoy adịghị ewu ewu ebe a, ọ bụ ezie na uru ya bara ụba nke na ọ bụ aha ya bụ "eze nwanyị akwụkwọ nri."
Kedu ka esi eto kabeeji kale n'ime ubi gị
Cabbage - isi na aru aru. Taa, ị ga-amụta otú ị ga-esi na-eto eto kabeeji na mkpụrụ osisi, ụdị ụdị ihe oriri dị mkpa na otu esi echekwa ya n'ụlọ. Kedu kabeeji kale na otú o si baa uru Cabbage Kale - ụdị kabeeji, ụdị ubi, nwere uru bara uru. A maara nke ọma dị ka grunkol ma ọ bụ braunkol.
Olee otú na-eto eto kabeeji seedlings
White kabeeji bụ akụkụ dị mkpa nke ihe oriri na-edozi anya nke onye nke ọ bụla. Nri akwukwo nri a bu ihe ndi ozo bu n'ihi eziokwu na o nwere otutu ihe bara uru na vitamin (A, B1, B2, C). Ya mere, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na kabeeji bụ onye ọbịa mgbe niile n'elu akwa ndị bi n'oge okpomọkụ anyị.
Chinese cabbage pak choi: Atụmatụ na-akụ ma na-elekọta
Chinese kabeeji pak choi bụ otu n'ime osisi ndị kasị ewu ewu na East Asia. N'ihi ezigbo mkpụrụ germination, unpretentiousness na ala na ihe oriri na-edozi ahụ, ọtụtụ ndị na-elekọta ihe ubi na mba anyị amalitela na-emepụta ụdị osisi a. Anyị ga-ekwukwa banyere ihe nzuzo nke ịgha mkpụrụ kwesịrị ekwesị na ilekọta akụrụngwa dị na isiokwu ahụ.
Kedu esi esi eto broccoli n'ọhịa
N'ebe anyị nọ, brokoli malitere ịkụ ma rie ya n'oge dị anya gara aga. Otú ọ dị, akwukwo nri a na-enweta ngwa ngwa na-ewu ewu, nke bara uru ya, uto ya na obere kalori. Maka uru ya, ịnwere ike ịgbakwunye ọbụna ịdị mfe na nlekọta. Ka anyị chọpụta otú e si eto broccoli na ubi.
Na mpaghara dị n'ebe ugwu, ịgha mkpụrụ kabeeji ozugbo na-emeghe n'ala dị nnọọ ize ndụ, dịka ike ntu oyi na-adị. N'ihi nke a, a na-etolite kabeeji n'ụzọ dị iche iche nke na-agụnye ịkọ. Taa, anyị ga-achọpụta otú e si esiji kabeeji n'ụlọ, ihe ọ ga-enye anyị na ihe ndị a na-achọ ịhọrọ abụghị nke a chọrọ.
Ọ dị m mkpa iburu akwụkwọ epupụta nke kabeeji?
Cabbage bụ ihe oriri a na-ewu ewu nke ndị bi n'oge okpomọkụ na-eto. N'isiokwu anyị, anyị ga-atụle otu n'ime ajụjụ ndị na-egbochi ọtụtụ ndị na-eto eto na-eri ihe: ọ dị mkpa iji wepụ akwụkwọ epupụta nke kabeeji? Kedu ka ndị na-eto eto na-eto eto Cabbage si kwuo - otu n'ime nsogbu ndị nwere nsogbu na-eto n'ubi ahụ, n'ihi na ọtụtụ mgbe, seedlings na-anwụ n'ime ala n'ihi enweghị mmiri na nri.
Iwu nhazi na usoro nke ogbugba mmiri n'ubi na oghere
Cabbage bụ otu n'ime ihe ndị a kụrụ n'ubi. A na-akụ ya n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba nile nke ụwa maka ebumnuche nke oriri, nakwa dịka osisi ọgwụ na ornamental. Eziokwu ahụ bụ na ọ dịghị ogige nri nwere ike ime n'enweghị kabeeji na-enye echiche na ilekọta ya adịghị mfe. Otú ọ dị, enwere ike ị nweta ihe ubi bara ụba nanị site na nhazi nke ịgbara mmiri kwesịrị ekwesị na fertilizing.
Iche iche nke kabeeji onyinye: nkọwa, foto, akuku, na-elekọta
Cabbage bụ otu n'ime ihe ọkụkụ kachasị ewu ewu. A maara ọtụtụ n'ime ụdị ya, taa, anyị ga-ekwurịta banyere Podarok dịgasị iche iche, bụ ndị a ma ama na mpaghara anyị. Nkọwa na njirimara Onyinye a bụ oge dị iche iche na-acha ọcha ọcha. Maka oge mbụ a kọwara ihe dịgasị iche iche na ndekọ ahụ na 1961, kwere ka a zụlite ahịa.
Esi lekọta kabeeji mgbe ị kụrụ n'ala na-emeghe
Otutu ndi oru ugbo, ndi oru ugbo na-elezi anya nke oma n'inwe akwukwo nri, mana ha amaghi uzo esi echefu kabeeji n'uwa. N'isiokwu a, anyị ga-atụle ihe ndị bụ isi maka nlekọta maka nri a bara uru, yana inye ndụmọdụ gbasara ịkọ oyi na ala maka osisi ahụ. Anyị na-enye nri kwesịrị ekwesị Isi ihe na-elekọta ihe oriri bụ ịgbara ya mmiri.
Taa, kabeeji na-eto eto na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu nile nke okpomọkụ nke ndị Russia. Ngwa a na-ewu ewu n'ụdị ọ bụla: raw, eghe, stewed, fermented, pickled, na pies na akwukwo nri. Na ezi ihe kpatara ya, n'ihi na ihe oriri a nwere ọtụtụ nri. Ụdị ụdị ọcha a na-akpọkarị "Otuto", nkọwa nke ịkụ ihe ma na-elekọta ubi nke anyị na-enye n'isiokwu a.
Sauerkraut ma ọ bụ salted kabeeji bụ efere dị mfe nke na-anọchi anya na nri anyị. Na ileba anya mbu, ọ dị mfe ịkwadebe ya, nke a bụ eziokwu, isi ihe bụ ịmara ihe nzuzo ndị ga-eme ka nri a bụrụ ezigbo ụtọ ma baa uru. Otu n'ime nuances nke nri bụ ụzọ dị iche iche a họọrọ nke ọma maka salting, na ụdị dị iche iche maka nke a, anyị ga-eleba anya n'isiokwu a.
Cabbage "Dzhetodor": àgwà, ịkọ agrotechnology
N'ime ihe niile a na-ere ugbu a, akwụkwọ nri na-eburu ebe kachasị na-edozi ahụ mmadụ. Ha na-eri nri nkịtị, na-agbakwunye nri nri, ha na-egbutu ha na salad. A na-eke nri n'ime tuber na mgbọrọgwụ, melons, grains, tomato. Okpokoro Cabbage, nke sitere na ndi Cabbage, bu ndi di iche iche n'ime ndi otu subgroup.
Early ripeness na elu mkpụrụ: tomato iche iche "Primadonna"
A tomato bụ beri, mkpụrụ ma ọ bụ ihe oriri; anyị ghọtara ọgba aghara.